Top 5 Astaamood Waxaad U Baahan Tahay Inaad Iska Eegto Marka Aad Dooranaysid Tifatiraha Sawirka
Tifaftirka sawirku wuxuu kakooban yahay dhammaan hababka wax looga beddelayo sawirrada dhijitaalka ah, hadey yihiin sawirro ku saleysan sawir dhaqameed sawirro ku saleysan kiimiko, ama sawirro muuqaal ah Waxay sidoo kale dabooleysaa aagga sawirada dhaqdhaqaaqa (sida 'duufsiga-kalluumeysiga' saamaynta badanaa la isticmaalo), iyo sidoo kale sawirro kombuyuutar soo saaray iyo filim iska jarid. Badanaa waxaa loo shaqeeyaa si kor loogu qaado muuqaalka shay gaar ah ama gabal farshaxan ah. Ereyga waxaa mararka qaarkood loo adeegsadaa is-beddelka sawir-gacmeedka dijitaalka ah. Tifaftirka sawirku, sidaa darteed, wuxuu daboolayaa dhammaan saddexda qaybood ee farshaxanka muuqaalka ah.
Waxaa jira aalado badan oo tafatirka sawirka bilaash ah oo aad u isticmaali karto hagaajinta sawiradaada. Kuwa ugu caansan uguna faa'iidada badan waa kuwa la tijaabiyey lana xaqiijiyey inay leeyihiin tayo wanaagsan oo wax lagu saxo oo ay leeyihiin sawir qaadayaal xirfadlayaal ah, farshaxanno garaafyo ah iyo khubarada filimka Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabkan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay tahay tifaftiraha sawirka ugu fiican ujeedooyinkaaga. Waa kuwan tixgelinno arrintan la xiriira:
- Tayo muuqaal sare leh ayaa muhiim ah haddii aad damacsan tahay inaad sawirradaada si dijitaal ah wax uga beddesho. Celceliska cabbirka daaqadda biraawsarka ayaa ku dhowaad laba megapixels ah, taas oo ah celceliska shaashadda kumbuyuutarka uu yahay. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa macno la'aan in la isku dayo in aad sawirradaada wax ka beddesho adoo adeegsanaya tifaftiraha sawirka oo keliya aqbala sawirrada miisaanka yar. Waxaa laga yaabaa inaad waqtigaaga ku lumiso maxaa yeelay cabirka sawirka ayaa aad u yar oo aan si fiican loogu soo bandhigi karin kombiyuutarkaaga.
- Tayada sare ee sawirku badanaa waxay ka dhigan tahay cabirka faylka sawirka sare. Tifatirayaasha xirfadlayaasha badankood waxay adeegsadaan algorithms farsamaynta horumarsan si ay u cadaadiyeen cabirka faylka sawirka. Hal dariiqo ayaa loo yaqaan feylasha faylka sawirka. Tani waxay ku cadaadinaysaa feylka sawirka hal feyl sawir oo guud ahaan ka yar sawirka asalka ah. Hab kale ayaa loo yaqaannaa isku dhejinta faylka sawirka.
- Tifatirayaasha sare ee sawirku waxay bixiyaan dhowr qalab oo kor loogu qaadayo sawirka dadka isticmaala si ay u saxaan sawirka. Mid ka mid ah qalabkani waa aaladda is-dulsaaran sawirka. Qalabkan, isticmaaluhu wuxuu ku goosan karaa, ku rogi karaa, ku dhajin karaa isla markaana ku hagaajin karaa asalka sawirka qayb kale oo ka mid ah sawirka ama ku rogi karaa sawirka. Qalabkan kor u qaadista sawirka ayaa lagama maarmaan u ah hagaajinta sawirada shabakadaha ama ujeedooyinka naqshadeynta garaafka.
- Muuqaal kale oo ka mid ah tifaftiraha sawirka dhijitaalka ah ee wax ku oolka ahi waa toosinta sawirka tooska ah. Astaantani waxay u saamaxaysaa barnaamijka inuu ogaado ciladaha ku jira sawirka, sida isha cas, geesaha sawirka ama meelaha aan sida saxda ah isugu habboonayn. Dhibaatooyinkan ayaa markaa si toos ah loogu saxaa software-ka tafatirka. Si looga gudbo cilladahan, tifaftiraha sawirka ayaa si otomaatig ah u hagaajin doona dhibaatooyinka. Tifatirayaasha sawirka qaarkood waxay leeyihiin awood ay ku hagaajiyaan sawirka iyagoo ku saleynaya cabirro kala duwan, midabbo iyo saamiga dhinacyada Tani aad ayey muhiim u tahay markaad tafatirayso noocyada kala duwan ee feylasha muuqaalka dhijitaalka ah.
- Muuqaalka saddexaad ee aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso waa awoodda aad ugu rogi karto faylka JPEG feyl PDF ah. Tifatirayaasha muuqaalka badankood waxay leeyihiin karti ay kuqaban karaan badalaadkan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad u beddesho JPG-ga loo yaqaan 'PDF', waa inaad ogaataa in tifaftiraha muuqaalka gaarka ahi uu taageersanyahay waxqabadka badalka PDF, sida Adobe Acrobat Reader.
- Waxaa jira tifaftirayaal badan oo muuqaal ah oo awood u leh inay isku daraan qaabab muuqaallo kala duwan ah. Tani waa mid waxtar leh markaad rabto inaad abuurto sawir ama mural sawir. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirrada dhijitaalka ah waxay awood u leeyihiin inay u dhoofiyaan qaabka faylka PNG. Qaab fayl PNG ah ayaa ah qaabka guud ee loo isticmaalo in sawirro waaweyn looga diro internetka. Tayada faylka png sidoo kale aad ayey ugafiican tahay sawirada caadiga ah barnaamijyo badan oo tafatirka sawirada ayaa awooda inay abuuraan tayada muuqaalka sare. Sidaa awgeed, waxaa muhiim kuu ah inaad iska hubiso tayada muuqaalka kahor intaadan u dhoofin natiijada ugu dambeysa kombuyuutarka.